May 2015 – Sunuwar.org
Posted by: uttam Kaatich | on May 15, 2015
उत्तर दिशा भएर घरबाट निस्केको म घर आगाँनबाट दक्षिणतिर लागेँ । मनिषाले काठमाडौंमा सामान लैजान भनेको हुँदा फोन लगाएँ । लागेना । उत्तमलाई फोन लगाएँ । त्यता पनि फोन स्वीच अफ रहेछ । सेल्पु हुँदै क्लुपा, तोषिपा भीर हुँदै गोठ डाँडाबाट चोकति पुल तरेर सेनी उकालो चढ्दै थिएँ । एक्लै उकालै उकालो । भीरको बाटो कटेर जंगलै जंगल । सुनसान, अनकण्टर । सेनी पाउरहाउस हुँदै माथि पुरानो घर कटेर जंगलमा हिड्दै थिएँ । अचानक पछाडि उता माप्रा भीरतिर ट्याक्टरले ढुंगा बोकेर आए जस्तो आवाज आयो । के करायो ? अचम्मले पछाडि फर्केर हेरेँ । अलि घोरिएर हेरेँ । आवाज नजिकीँदै आयो । यस्तो जंगलमा पनि के करायो यसरी भन्ने लाग्यो । त्यो आवाज झन् झन चर्किँदै मतिर आयो । हेर्दा हेर्दै परबाट भुइँ नै थर्काएर मतिर आएको प्रष्ट देखेँ । ल, के पो आयो, यो जंगल वीचमा मन झस्केर त्रसित बने । भूत हो कि न त कुनै अकल्पनीय जनवार के हो के हो अनेक तर्कना मनमा एकैचोटी उम्रिन पाउँदा नपाउँदै म उभिएको भूइँ नै हल्लिन थाल्यो । त्यसपछि मात्र मलाई यो भुइँचालो हो भन्ने याद भयो । रुख सबै हल्लियो । माथिबाट गोली बर्षे जस्तै ढुंगा बर्षिना थाले । त्यतिबेला मलाई कतै भाग्ने आँट आएन । अब ढुंगाले किचेर मर्ने भएँ भन्ने मात्र मनमा उब्ज्यो । म उभिएको ठाउँ सहित पहिरो गयो भन्ने लाग्यो । म ट्वाँ परेर उँभो मात्र हेरिरहेँ । मुखबाट राम राम भन्ने शब्द अप्रत्यासित फुस्के छ । ढुंगा मेरो सिधा आयो भने छलिन्छु भन्ने होस चाहिँ रह्यो । तर यताउता सर्ने आँट आएन । हेर्दाहेर्दै घरै जत्रो ढुंगा मेरो दाहिने बज्रेर उँधो चोकतितिर गयो । विस्तारै भूइँको कम्पन कम भयो । ढुंगा माथिबाट झर्न रोकियो । अनि हस्याङ फस्याङ अगाडि उकालो तर पचेङ दौडिने कोशिस गरेँ । के सक्नु ? स्याँस्याँ र फ्याँ फ्याँ भएँ । आत्तासले मनमा जरोको नसा तीब्ररुपमा फैलियो । ख्लिनु फर्केर आउँछ भन्छन् गाउँमा । अवश्य पनि अर्को झड्काको भुइँचालो जान्छ भन्ने लागीरहेको थियो । बल्ला बल्ला सेनि पुच्छार, बेँबेर जाने दोबाटोको सल्ला डाँडा निस्केँ । अब भने बाँचे जस्तो लाग्यो । Read More
Posted by: uttam Kaatich | on May 14, 2015
भुइँकम्प आए पनि हामी घेवामै व्यस्त थियौं । कोइँच मुक्दुमानुसार भएको घेवा भएको हुँदा मलाई सबैले केरकार गरिरहेका थिए । अनि म भने हिन्दू धर्ममा गरुड पुराण सुनाए जस्तै कोइँच मुक्दुमबाट घेवा गर्दा मृत व्यक्तिको आत्मले कसरी मोक्षा, निर्वाण अर्थात् बुइश-शि लाँ प्राप्त गर्दछ सुनाइरहेको थिएँ । सानोतिनो भुइँचलोको झड्का आइरहेकै थियो । घेवा सक्यौं । सँगसँगै किरात चाड शाँदार पिदार पनि आइरहेको थियो । Read More
Posted by: uttam Kaatich | on May 13, 2015